'IHubie Halloween' Ngaba (Ngokuqhelekileyo) ilunge ngaphezu kokuba simfanele - Iimuvi
'IHubie Halloween' Ngaba (Ngokuqhelekileyo) ilunge ngaphezu kokuba simfanele
Xa uAdam Sandler wayephakathi kukhenketho lwakhe lokushicilela lwe Amagugu angaSuswanga , Wenza isithembiso nge Umboniso weSoward Stern leyo yayiyinyani, isoyikiso: Ukuba akafumananga i-Oscar ngokusebenza kwakhe ngokugqwesileyo, uya kwenza imuvi imbi ngenjongo. Ukungahambelani ngokupheleleyo nodliwanondlebe, nanku umzuzu ukusuka kwimizuzu yokuvula yefilimu entsha kaSandler yeNetflix, IHubie Halloween :
Ngoku, i-sleuth engahlawulwayo inokwenza imeko ukuba IHubie Halloween sisohlwayo uSandler asenzileyo kwiAkhademi ngokunganeli nje ukuthintela uSandman weOscar, kodwa no ukutyunjwa . ( Amagugu angaSuswanga , iyonke, yayivalwe ngokupheleleyo kwii-Oscars; kungcono Isidudu Kodwa umda wexesha awulandeli: IHubie Halloween sele iqalile ukufota okuyintloko ngaphambili Amagugu angaSuswanga ’Ukufika kwiithiyetha okanye ukubhengezwa kokutyunjwa kukaOscar. Ngangoko ndifuna ukukholelwa ukuba ukugabha kukaSandler emva kokugungqa amaqanda amathathu kwi-thermos yakhe njenge-smoothie yayiyinkcazo ecekeceke malunga nokuhluthwa ngomsebenzi wakhe obalaseleyo ukusukela Uthando lwePunch-Drunk , IHubie Halloween Kuphela ngumdlalo bhanyabhanya uSandler awayeza kuwenzela iNetflix.
Ubudlelwane bukaSandler kunye nokusasaza kuye kwangqineka kuyinzuzo macala. Emva kokusayina umhlekisi kwi isivumelwano semifanekiso emine Ngo-2014, iNetflix yaqhayisa bangaphi abasebenzisi abazijongileyo ii-comedies ezikhokelwa nguSandler ( Ugculelo 6 , Ukwenza ngaphezulu , USandy Wexler , kunye Iveki ka ). Ngelixa iimetrikhi zangaphakathi endlwini zomsasazi kufuneka zihlale zithathwa ngethamo elisempilweni lokuthandabuza, inyani iNetflix iphinde yaxhaswa ngeSandler ye esinye isivumelwano semifanekiso emine - IHubie Halloween ukuba yenye yezo projekthi-bubungqina obaneleyo bokuba ebelishishini elilungileyo kubo. Ngokubhekisele kuSandler, ke, uya kwenza imiboniso bhanyabhanya yokugxeka abalingane bakhe abahamba phambili-uSteve Buscemi, uKevin James, uRob Schneider, njl -njl. Yiyo, njengoko yenziwe ngokugqibeleleyo ngumlingane wam uRob Harvilla, kaSandler Isigaba seDGAF . Le yindlela aphumelela ngayo .
james franco oscars umgcini
Ungazibala njengophumeleleyo, ukuba uburharha bentsha ye IHubie Halloween yile nto uyirhalelayo. Lo ngumdlalo bhanyabhanya apho umdlali we-Oscar oneminyaka engama-90 otyunjwe ngumdlali weqonga uJune Squibb, odlala umama kaSandler, enxibe izikipa ezingaqhelekanga ezithetha izinto ezinje ngeBoner Donor kunye neKayaking Gets Me Wet. Lo ngumdlalo bhanyabhanya apho uRay Liotta enxiba i-clown wig kwiHalloween, azame kwaye asilele ukuthandana nomfazi omncinci, kwaye uxelele wonke umntu ukuba unemicimbi yokuzithemba kuba uyazi ukuba usisidenge. Le bhanyabhanya apho uSteve Buscemi, oqinisekileyo ukuba uyingcuka, abaleke kwiwadi yengqondo. Lo ngumdlalo bhanyabhanya apho ngolungelelwano ofumanisa ukuba kunokwenzeka ukuba nguWavewolf Steve Buscemi ubalekile nguBen Stiller. (I-Stiller's orderly ibonakala iyakuqinisekisa oko IHubie Halloween ikhona kwifayile ye- Ulonwabo lweGilmore Cinematic Universe .)
Nantsi i-June Squibb kwenye yezo T-shirts ezintsha kuba, kufuneka ndivume, isuntswana luhlobo oluhlekisayo:
Yintoni enye endinokuyithetha ngokwenene IHubie Halloween ? Kububungqina bokugxeka njengayo yonke ikhathalogu yeSandler-Netflix, kwaye imayile yakho iya kwahluka ngokuxhomekeka kwindlela ohlekiswe ngayo ziifilimu ezininzi zokubona. Ngokwam, ndiwela ndaweni ithile embindini weSandler ohlekisayo: Ngelixa abanye abantu befunga ngayo yonke imovie yakhe engenangqondo kwaye abanye babazonda bonke ngokomgaqo, andinangxaki nokubajonga kwimeko-ngamatyala . UJack noJill , Ngoku ndikuvakalisela u-Chuck kunye noLarry , kwaye i Abantu abakhulile ilungelo lokuzikhusela lilungelo elizothe; Mnu Deeds , Cofa , kunye Imihla yokuQala engama-50 Kuya kufuneka ufumane ukukhutshwa kweekhrayitheriya.
umzala weveki yeeveki 4 ezikhethiweyo
Kodwa ngokusekwe kwibar esezantsi esetwe ngumnxeba kaSandler ofowunelwe-kwisigaba seNetflix- hayi ukugweba, ngubani ongayi kwenza okufanayo kwizihlangu zakhe? - IHubie Halloween inexesha layo elinomtsalane. Isiseko, sokuba uHubie Dubois (Sandler), umhlali wase Salem, eMassachusetts, osoloko ejonge abemi abangoye kwiholide yakhe ayithandayo, iHalloween, iyamangalisa, kodwa ngendlela engathandekiyo. Uyangcungcuthekiswa kwaye akahoywa phantse ngabo bonke abantu beedolophu, kodwa akayivumeli ichaphazele indlela aziphethe ngayo, ukuthanda iHalloween, okanye ukudibana kwakhe nokuphatha isuphu yile nto, eyiyo, ithermos yomlingo. (Kuwo wonke umboniso bhanyabhanya, sifumanisa ukuba i-thermos ikwasebenza njengesixhobo sokubambana, iscrewdriver, isibane, nayo nayiphi na into efunwa nguHubie. Ngokuqinisekileyo inamandla njengekhaka likaCaptain America.)
UHubie uluhlobo oluthile UTed lasso : U-corny, kodwa ngamandla amakhulu okuthanda, ububele bakhe buyaphumelela. (Xa engakhathali egabha isuphu kunye namaqanda.) Idolophu, ekugqibeleni, iyafudumeza noHubie- ngakumbi xa edibene nokusombulula imfihlakalo ebhakwe ngabemi yokunyamalala ngobusuku beHalloween, enokuba nento yenza nombaleki wewadi yengqondo. Intoni IHubie Halloween isilela ekuhlekeni kwehlaya eliphezulu leSandler, ingaphezulu kokulungiselela ukungcangcazela okuhle. Iyosulela. Ngaba ufuna ukubona uHubie esebenzisa isuphu ukunqanda abantu abathile basezidolophini ukuba batshiswe ngomlilo ekuphindaphindweni kwentliziyo kovavanyo lobugqwirha baseSalem? Ewe uyayenza:
Ixesha elichanekileyo ngaphandle, imovie ayiziva imbi kangaka ngenjongo. IHubie Halloween akunjalo Kulungile , kodwa uSandler akakhange akrwele ezantsi komgqomo wakhe. Kuhlala kuhlazekile ukuba akazange afumane ukutyunjwa kuka-Oscar Amagugu angaSuswanga -Ilungelo likaSandman lifanelwe yi-Oscar! -Ndaye mna ngokwam ndamkelekileyo uSandler ebambelela kwilizwi lakhe ngokohlwaya iAkhademi ngento eyoyikeka kwaphela kwi-dime yeNetflix. Mhlawumbi kuyakwenzeka ngenye imini. Kodwa okwangoku, ukuba ufuna i-harbinger yento enokubonakala ngathi, jonga Ugculelo 6 .
Imeyile (iyafuneka) Ngokusayina, uyavuma kuthi Isaziso sangasese kunye nabasebenzisi baseYurophu bayavuma umgaqo-nkqubo wokudlulisa idatha. Bhalisa
hbo emva komdlalo weetrone
ngoSeptemba 11 2001 iimuvi
bone thugs n ukuvumelana cleveland
anne hathaway yazaliseka
Idrafti nfl uyilo 2018
Ingqondo ka-robert bryson